Isicoci seXiaomi silapha ukucoca iselfowuni yakho kwingxubevange | I-Androidsis
Icocekile iLite yinkqubo entsha kaXiaomi yokwenza iselfowuni yakho icoceke kunempempe
UManuel Ramirez | | Ukusetyenziswa kwe-Android, Xiaomi
Icocekile iLite yinkqubo entsha evela kwiXiaomi kwaye iya kwimeko ye-beta ukuze ukwazi ukuyizama kwangaphambili. Uhlelo lokusebenza olunikezelwe ekucoceni "i-junk" okanye inkunkuma onayo kwiselfowuni yakho ye-Android.
Le app intsha isuka UXiaomi unokuzikhuphela zonke kwaye ayinxulunyaniswa nefowuni yohlobo lwaseTshayina. Oko kukuthi, ungayifaka ukusuka ngoku ukuya phambili ukuze ube namava afanayo neFayile Go nguGoogle.
1 Ifana kakhulu neFayile kuGoogle
2 Iimpawu zayo ezisisiseko
3 Inkqubo yeLite Lite
Ifana kakhulu neFayile kuGoogle
Sele beyithathile ekulingiseni amava abonelelwe yiFayile Go kwaye oko kuphawulwa ngokuququzelela, kwabo bangafundiyo kubuchwephesha obutsha, ukucoca iselfowuni kuloo nkunkuma, izinto eziphindiweyo okanye iifayile ezinkulu, kwaye ezinokuhlala kwindawo yazo kwezi fowuni zinomda kwimemori yangaphakathi.
Ewe kunjalo, kufuneka icace gca ukuba kuyilo loCocekileyo lweLite sisixhobo esisetyenzwe kakuhle kwaye uyalubona olo lwimi lucacileyo olunikezela ngamava omsebenzisi amahle. Uhlelo lokusebenza olubonakala lilinganiselwe kwimisebenzi, kodwa olunokubonwa emva kokuba senze okokuqala ukucoca loo nkunkuma esinayo kwiselfowuni njengee-APK ezilahlekileyo kunye nokunye.
Ngamanye amagama, sithetha ngeapp ophetheyo wokucoca i-cache kunye nezo fayile zingafunekiyo ukuba asisayisebenzisi thina okanye inkqubo yethu yeselfowuni. Yiyo loo nto, okokuqala, isinika uthotho lwezizathu zokungayideleli kwaye siyibeke ecaleni, nangona kunjalo Andikwazi ukuhlala ngaphandle kweFayile kuGoogle, isenokusilela.
Into esingayiqondiyo yile "lite". Ndinyanisa, kucingelwa ukuba kuya kubakho usetyenziso lweprimiyamu esinokuyithenga kwaye le lite yeyasimahla eza kuza nentengiso. Okwangoku ayinayo kwaye nayo yonke into enayo inikwe kukhuphelo olunye ngaphandle kokuqhubeka. Ke xa iphuma kwi-beta iya kuzisa ingxelo ehlawulelweyo.
Iimpawu zayo ezisisiseko
I-Lite ecocekileyo ibonakaliswa ngu:
Coca inkunkuma kwiselfowuni yakhoIcocekile Lite inoxanduva lokufumana iifayile ze-junk, i-cache, iiphakheji zokufaka ezingasasebenziyo okanye ii-APKS, idatha eyintsalela evela kwiiapps kunye nezinye izinto ezithatha indawo kwimemori yeselfowuni.
Imifanekiso ecocekileyo: Icocekile iLite iyakwazi ukubona imifanekiso emnyama nevezwe kakhulu, ngengozi, ngaphandle kokugxilwa nakwizinto eziphindiweyo. Sinokukhetha ngokuchanekileyo ukuba zeziphi iifoto esiza kuzicima emva kokubonisa ukhetho kuzo oceba ukuzicima, okoko nje sinika ukuqhubeka.
Cima iifayile ezinkulu: ezo fayile zikhulu zikwiselfowuni ziya kufunyanwa zicocekile Lite ukuzisusa ukuba sinqwenela.
Zonke ezi zinto zahlukileyo uziqokelela kumacandelo abo ukubonisa elona xabiso zeegigabytes okanye ii-megabytes ezihlala ngokutsha ngokukhawuleza kunye nokwenza izigqibo.
Inkqubo yeLite Lite
Okokuqala, iya kucoca i-cache kunye nezo fayile ze-junk. Iya kuba siscreen sokuqala osifumanayo. Ucima ii-APK ezilahlekileyo, kwaye iya kucoca. Emva koko, uya kudlula kuwo onke amanye amacandelo ukuze uthathe isigqibo ngemifanekiso ephindiweyo okanye amacandelo ahambelana neefayile ezinkulu.
Ngaba uya kuyenza yonke ngoopopayi abatsala amehlo kunye nokuchukumisa okukhulu kuyilo lwesicelo. Into esingathanda ukuyazi yile yenzekayo nge-lite app. Kwaye ukuba siya kulungelelwaniso asiyi kufumana nto. Ke asazi ukuba kuya kwenzeka ntoni kuyo yonke loo misebenzi. Ukuba baya kuhlala kule okanye baya kwipremiyamu.
Yiba njalo, UXioami uqalise usetyenziso olunomdla ukuba, nangona inokufana neefayile zikaGoogle Go, ngokwayo kufanelekile ukuba ibe nakho ukujongana nokucoca iselfowuni yethu xa sisiva ukuba iyacotha kwaye ifuna uphononongo olulungileyo. Unayo ukufakwa kwangaphambili ukwenzela ukuba uvavanye ubuhle kunye nezibonelelo zayo.
Icocekile eLite-Khulula indawo yokugcina
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Icocekile iLite yinkqubo entsha kaXiaomi yokwenza iselfowuni yakho icoceke kunempempe
Musa ukundigona Iqonga leJetpack Joyride elinetoni ye-pastel kakhulu